Manuel Rivas, mumwe weakakosha manhamba mumabhuku eGalician | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Vanyori
Quote naManuel Rivas.
Manuel Rivas munyori wechiSpanish akafunga seimwe yeanonyanya kuzivisa mabhuku eGalician. Munguva yebasa rake akazvipira mukusimudzira zvinyorwa, zvinyorwa uye mabasa enhetembo; izvo iye pachake zvaanoidza "kuverevedza kwevanhukadzi." Mazhinji emabhuku ake akaturikirwa mumitauro inodarika makumi matatu, uye mamwe akagadziridzwa kuita firimu panguva dzakasiyana.
Saizvozvo, munyori weGalician akamira kunze kwebasa rake mundima yevatapi venhau. Iri basa rakaratidzirwa mukuumbwa kwaro: Utapi venhau inyaya (1994), iyo inoshandiswa senge rezita rezvinyorwa mune makuru eVakuru veSainzi Sayenzi muSpain.
1.1 Zvekunyora mabasa
1.2 Zvinyorwa zvemitambo
2 Mabhuku akanakisa aManuel Rivas
2.1 Unoda kuti ndide chii? (1997)
2.2 Penzura yemuvezi (2002)
Munyori uye mutori wenhau Manuel Rivas Barrós akaberekerwa muLa Curuña muna Gumiguru 24, 1957. Iye aibva kumhuri yakaderera, amai vake vaitengesa mukaka uye baba vake vaishanda sebrickrick. Zvisinei nekushomeka, akakwanisa kudzidza kuES Monelos. Makore gare gare - apo aishanda semutori wenhau - akadzidza akawana degree rake mu Information Sayenzi kuComplutense University yeMadrid.
Rivas ave nebasa rakareba semutori wenhau; akapinda mune zvese zvakanyorwa midhiya, pamwe neredhiyo neterevhizheni. Pazera remakore gumi nemashanu chete, akaita basa rake rekutanga mupepanhau Iyo yeGalician Yakanaka. Muna 1976, akapinda mumagazini Theme, chinyorwa rakanyorwa neGalician.
Basa rake mumagazini yeSpain rinobuda pachena Chinja 16, kwaakapedzisira ave mutevedzeri wemutungamiriri uye anoona nezve tsika nzvimbo ye Bharuni. Nezve kutora chikamu kwaro muredhiyo, yakavhurwazve muna 2003 - pamwe chete naXurxo Souto-- Quack FM (La Curuña nharaunda redhiyo). Parizvino anoshanda semunyori wepepanhau Nyika, basa iro anga achiita ikoko kubvira 1983.
Rivas akanyora nhetembo dzake dzekutanga muma 70s, iyo yaakaburitsa mumagazini isingazivikanwe yeboka Loya. Mukati menzira yacho yose semunyori yapa nhetembo 9 uye anthology inonzi: Taundi rehusiku (1997). Rakanzi bhuku rinozadzikiswa ne disc, mairi iye amene anodzokorora gumi nemaviri enziyo dzake.
Saizvozvowo, munyori akashinga mukugadzirwa kwemanyorerwo aine gumi nematanhatu ezvinyorwa. Basa rake rekutanga mumhando iyi rine zita rekuti Miriyoni mombe (1989), iyo iine nyaya uye nhetembo. Nebasa iri, Rivas akawana kekutanga mubairo weGalician Narrative Criticism.
Munguva yebasa rake Akaburitsa akati wandei mabasa akamupa kusazivikanwa, kungofanana nekuunganidzwa kwenyaya Unodei kwandiri, rudo? (1995). Naizvozvi akakwanisa kuwana maNational Narrative Awards (1996) uye Torrente Ballester (1995). Mukati meizvi kuunganidzwa ndekwe: Rurimi rwemapururu, ipfupi nyaya yakashandisirwa bhaisikopo muna 1999 uye kuhwina mubairo weGoya weakanakisa akashandurwa screenplay muna 2000
Pakati pemabasa ake akakosha atinogona kutaura: Penzura yemuvezi (1998), Iwo marimi akarasika (2002), Tese tiri vaviri (2003), Zvese kunyarara (2010) y Iwo mazwi akaderera (2012). Bhuku rekupedzisira rakapihwa nemunyori ndi Kugara pasina mvumo nedzimwe nyaya dzekumadokero (2018), Iyo inoumbwa nhatu pfupi pfupi. Kutya kwehedgehogs, Kurarama pasina mvumo y Gungwa dzvene.
Mabhuku akanakisa aManuel Rivas
Unodei kwandiri, rudo? (1997)
Iri ibhuku rakaumbwa nenhau gumi nenomwe dzinotsanangura madingindira akasiyana siyana nezvehukama hwevanhu, zvechinyakare nezvazvino. Mumutambo uyu mweya wenhau wemunyori unoratidzwa, uko rudo ndirwo hwaro munyaya dzese. Kunzwa uku kunoratidzwa munzira dzakasiyana: kubva platonic kusvika pakurwadziwa kwemoyo kusuruvara.
Vamwe yeizvi nyaya dzine toni inofadza uye inonakidza, asi dzimwe dzinobata madingindira akasimba, kuratidzwa kweicho chaicho chiripo. Vanhu vanoita nyeredzi mune idzi nyaya zvakajairika uye zvakapusa, senge: mufambi, mukaka wemukaka, muimbi wechidiki, vana neshamwari dzavo dzepedyo; imwe neimwe ine kukwidza kwakati.
Pakati penyaya, zvinotevera zvinomira pachena: Rurimi rwemapururu, nyaya iri pakati pemucheche nemudzidzisi wake, iyo inokanganiswa nekuparadzwa kwema 30. Iyi nyaya yakabudirira kugadziridzwa kune hombe skrini naAntón Reixa. Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kusangana uku kwakashandurwa mumitauro inodarika makumi matatu uye zvakabvumidza munyori kuti azivikanwe munyika yezvinyorwa.
Unodei kwandiri, rudo? ...
Nyaya dze Unodei kwandiri, rudo? (1997):
"Unodei kwandiri, rudo?"
"Vermeer mukaka wemukaka"
"Makuva makuru eHaana"
"Musikana ari mubhurugwa repirate"
"Ruva jena rezviremwaremwa"
"Kuuya kweuchenjeri nenguva."
Penzura yemuvezi (2002)
Iyo inoverengeka yerudo iyo zvakare inoratidza chokwadi chevasungwa veRepublican vemujeri reSantiago de Compostela, muna 1936. Iyo nyaya inorondedzerwa mumunhu wekutanga newechitatu nevanhu vaviri vanonyanya kutaurwa: Dr. Daniel Da Barca naHerbal. Zvakare chikamu chakakosha chebumbiro: Marisa Mallo neMupendi - musungwa anodhirowa zviitiko zvakasiyana nepenzura yemuvezi.
Mune ino novel iyo nyaya yerudo pakati paDkt.Daniel Da Barca -republican- uye mudiki Marisa Mallo inoratidzwa. Da Barca akasungwa nekuda kwezvematongerwo enyika mafungiro nezviito. Izvi zvinomanikidza hukama pakati pevaviri, sezvo ivo vachifanira kurwira rudo rwavo, yavo yekuroora muchato ari kure uye chokwadi chekuti nyika yese inorarama.
Kune rimwe divi, kune musungwa Herbal, uyo anosangana naDa Barca mutirongo ndokushushikana naye. Uyu mukuru munhu anonetsekana, anofarira kutambudzwa nekushungurudzwa, uye akaita akawanda ekuurayiwa mutirongo.
Munyori, pachikamu chake, anomiririra tarenda rake rakakura rekufananidzira. Iye yakadhonza Pórtico de la Gloria, uye imomo yakaita mufananidzo wevamwe vaishungurudzwa. Basa racho rakaitwa nepenzura yemuvezi chete, iyo yakatorwa kwaari naHerbal imwe nguva asati aiuraya.
Sezvo nyaya ichienderera mberi, chiremba anotongerwa rufu. Asati aurayiwa, anoenda mukushungurudzwa kwakanyanya naHerbal, uyo anoedza kupedza hupenyu hwake mutongo usati wapera. Kunyangwe nedambudziko, anokwanisa kurarama uye kuzadzisa chishuwo chake chekuroora rudo rwehupenyu hwake. Makore gare gare, anowana rusununguko rwake uye anopedzisira aenda muutapwa kuLatin America, kubva kwaanotaura chikamu chake chenyaya mubvunzurudzo.
Penzura yemuvezi ...
Iwo mazwi akaderera (2012)
Iyo nhoroondo yehupenyu hwezviitiko zvemunyori uye nasisi vake María, kubva paudiki kusvika mukukura muLa Curuña. La nhoroondo inotsanangurwa muzvitsauko zvipfupi makumi maviri nezviviri, nemazita ezvinzvimbo anopa mavambo mashoma kune zvirimo. Mune inova, protagonist anoratidza kutya kwake uye zviitiko zvakasiyana kumhuri yake; mazhinji eaya nezwi rakasuruvara uye risingafadzi.
Manuel Rivas anorondedzera ndangariro dzehudiki hwake nemhuri yake, achinyanya kusimbisa patsika nemagariro eGalician. Zviitiko zvakawanda muhupenyu hwake zvinotsanangurwa muchidimbu, nemaonero akasanganiswa akajeka.
Munyaya María anomira kunze - hanzvadzi yake inodikanwa-, waanoratidza semukadzi mudiki anopandukira ane hunhu hunoratidzwa. Anokudzwa nemoyo pamagumo emutambo, sezvo akafa mushure mekurwara nekenza yakaipa.
Izwi rakaderera (Zvakanakisisa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Manuel Rivas